China PET Broom Filament Making Machine စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ | Zhuoya
PET တံမြက်စည်းချည်မျှင်ပြုလုပ်သည့်စက်ကို PET တံမြက်စည်းဖိုက်ဘာပြုလုပ်သည့်စက်၊ PET တံမြက်စည်းအမွေးအမှင်လိုင်း၊ ပလပ်စတစ်တံမြက်စည်းအတွက် PET ချည်မျှင်စက် စသည်တို့ဖြင့် အမည်ပေးထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော စက်လိုင်းသည် သင့်လိုအပ်ချက်အရ အချင်းအမျိုးမျိုးသော တံမြက်စည်းမျှင်များကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ဤအတောအတွင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရင့်ကျက်သောနည်းပညာပံ့ပိုးမှုဖြင့် အမျှင်သည် ဖြောင့်၊ ကစ်ကျစ်၊ အစိုင်အခဲ၊ အခေါင်းပေါက်၊ အလံပြနိုင်၊ အလံမလှဲနိုင်၊
၎င်း၏ကောင်းမွန်သောဂုဏ်သတ္တိများ၊ ကောင်းမွန်သောခေါက်နိုင်မှုနှင့်သန့်ရှင်းရေးနှင့်ဘေးကင်းမှု၊ 100% PET ပြန်လည်အသုံးပြုကုန်ကြမ်း၏ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးသောကြောင့် PET ချည်မျှင်သည် မတူညီသောသန့်ရှင်းရေးတံမြက်စည်းများနှင့်စုတ်တံများအဖြစ် ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုလျက်ရှိသည်။
1. ကုန်ကြမ်းသည် 100% ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော PET ပုလင်းအမှုန်အမွှားများ ဖြစ်နိုင်သည်။
2. ရင့်ကျက်သောနည်းပညာဖြင့် စက်လိုင်းဒီဇိုင်း။
4. ထိပ်တန်း အရည်အသွေး ချည်မျှင် အာမခံ။
>> PET တံမြက်စည်းချည်မျှင်ပြုလုပ်သည့်စက်
ယခင်- အရည်အသွေးမြင့် တရုတ် Monofilament Extrusion စက်/ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် တံမြက်စည်း ချည်မျှင်ကြိုး ဝါယာ ဘရိတ်လုပ်စက်
နောက်တစ်ခု: PP တံမြက်စည်းချည်မျှင်ပြုလုပ်သည့်စက်